Wax taaj oo kale duro - Mestech Industrial Limited
Wax taaj oo kale duray caag ah waa ka ugu ballaaran loo isticmaalo mid ka mid ah wax taaj oo kale caag ah. Qaybaha wax lagu shubay ee caaga ah waxaa loo adeegsadaa elektiroonig, koronto, koronto, caafimaad, gaadiid, gaari, nal, ilaalinta deegaanka, amniga, qalabka guryaha, qalabka isboortiga iyo warshadaha iyo wax soo saarka kale.
Waa maxay wax ka sameynta duritaanka? Wax taaj oo kale duray caag ah waa geedi socodka wax soo saarka ah ee soo saarista qaybo heer kulka gaar ah, iyada oo loo marayo furitaanka walaaqaya qalabka caaga ah oo si buuxda u dhalaalay, cirbadeynta cadaadiska sare ee godka caaryada, ka dib qaboojinta iyo daaweynta, si loo helo habka wax u sameynta. Habkani wuxuu ku habboon yahay wax soo saarka dufcadda ee qaybaha isku dhafan waana mid ka mid ah hababka wax soo saarka muhiimka ah. Waxaa jira 6 marxaladood: xiritaanka caaryada, cirbadda caagga ah ee la dhalaalay, cadaadiska haynta, qaboojinta, furitaanka caaryada iyo wax soo saarka. Xawaaraha, cadaadiska, booska (istaroogga), waqtiga iyo heer kulka waa 5 cunsur oo muhiim u ah wax ka sameynta duritaanka.
Saddex walxood oo ka mid ah unugyada wax soo saarka irbadda ah
Codsiga alaabta wax taaj oo kale duray
(1) ee alaabta elektaroniga: .Baritaanka elektarooniga ah ee isgaarsiinta iyo macaamiisha elektarooniga ah (guryaha balaastigga ah, xayndaabka, sanduuqa, daboolka) taleefannada gacanta, dhagaha, telefishannada, taleefannada fiidiyowga, mashiinnada POS, gambaleelka albaabka.
(2) Qalabka Guriga: Kafee sameeyaha, sharaabka, qaboojiyaha, qaboojiyaha, mashiinka dharka lagu dhaqo iyo foornada microwave
(3) qalabka korontada: mitirka korontada, sanduuqa korontada, kabadhka korontada, qalabka isweydaarsiga soo noqnoqda, daboolka dahaadhka iyo badalka
(4) qalabka caafimaadka iyo aaladaha: Nalalka lagu shaqeeyo, sphygmomanometer, sirinjiye, dhibco, dhalada daawada, duugista, qalabka timaha laga saaro, qalabka jir dhiska
(5) gawaarida: Qalabka jirka ee dashboardka, qaybta batteriga, qaybta hore, sanduuqa xakamaynta, xayndaabka taageerada kursiga, mandheerta firaaqada, foorarka, bumbiyuutarka, daboolka jiifka, carqaladda buuqa, albaabka gadaal gadaashiisa.
(6) Qalabka warshadaha: Qalabka mashiinka mashiinka, maareynta, shidashada, laydhka.
(7) Qalabka taraafikada iyo qalabka baabuurta (daboolka nalka, xarkaha) Nalka calaamadaha, calaamadda, tijaabiyaha aalkolada.
Caaryada, mashiinka wax lagu duro ee la isku duro iyo alaabada ceyriinka caagga ah waxay ka kooban yihiin unug aasaasi ah oo ka sameysma duritaanka. Mashiinka caaryada iyo mashiinka wax lagu duro ayaa ah qalabka wax soo saarka, iyo alaabada ceeriin ee caaga ah ayaa loo isticmaalaa inay ka kooban tahay alaabta wax soo saarka.
1. wasakhahaasi duray
Caaryada duritaanka waa nooc ka mid ah qalabka lagu soo saaro alaabada caagga ah; sidoo kale waa aalad siinta alaabada balaastigga ah qaab-dhismeed dhameystiran iyo cabir sax ah. Wax taaj oo kale duro waa nooc ka mid ah habka wax soo saarka loo isticmaalo wax soo saarka Dufcaddii ee qaybo ka mid adag. Gaar ahaan, caaga la dhalaalay waxaa lagu duraa mashiinka caaryada mashiinka wax lagu shubo oo ku hoos jira cadaadis sare, iyo badeecada qaabaysan ayaa la helaa ka dib qaboojinta iyo daaweynta. Caaryada duritaanka waxaa loo qaybin karaa noocyo kala duwan iyadoo loo eegayo qaabdhismeedka caaryada ee kaladuwan, shuruudaha naqshadeynta alaabada, qaabka wax soo saarka iyo qaab dhismeedka.
Sababtoo ah qiimaha waxsoosaarka sare ee wasakhaha, laakiin noloshooda adeeg dheer iyo waxtarka sare ee wax soo saarka, waxaa badanaa loo isticmaalaa wax soo saar ballaaran. Caaryada duritaanka waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka ballaaran ee qaybaha balaastigga ah. Tiro aad u tiro badan oo wax soo saar caag ah oo tayo sare leh, oo si weyn u wadaagaya qiimaha wax soo saarka caaryada, sidaas darteed qiimaha wax soo saarka ee wax isku qurxinta wax soo saarka oo keliya ayaa aad uga hooseeya tan hababka kale ee wax lagu farsameeyo. Waxaa jira saddex marxaladood oo naqshadeynta caaryada iyo ansaxinta caaryada.
(1) Naqshadeynta caaryada:
Naqshadeynta caaryadu waxay ku saleysan tahay naqshadeynta wax soo saarka, isticmaalka softiweerka naqshadeynta, sida ku cad heerka wax soo saarka caaryada ee farsamaynta farsamooyinka iyo sifooyinka habka wax taaj oo kale ee duritaanka, naqshadeynta habka mashiinka oo dhan, qaybo.
(a) Tallaabada ugu horreysa waa in la falanqeeyo naqshadeynta alaabada caagga ah
(b) Talaabada labaad waa xulashada walxaha dhiman
(c) Tallaabada saddexaad waa naqshadaynta qaabka caaryada
(d) Tallaabada afraad waa naqshadaynta qaybaha caaryada
(2) Waxsoosaarka caaryada
Processing caaryada inta badan waa iyada oo loo marayo farsamo si ay u dhamaystiraan Drawing dib u eegis, diyaarinta wax, processing, caaryada processing saldhig, caaryada muhiimka ah processing, koronto processing, qaybo caaryada processing, kormeerka, shirkii, caaryada duulaya, caaryada tijaabada → wax soo saarka
Wareegga waxqabadka ee caaryada la isku duro waxay kuxirantahay kakanaanta iyo heerka waxqabadka ee caaryada. Wareegga wax soo saarka guud waa 20-60 maalmood oo shaqo. Mashiinka loo isticmaalo wax soo saarka caaryada: CNC, lathe, mashiinka guud ee wax shiida, mashiinka mashiinka dusha sare, EDM, WEDM, iyo sidoo kale isku soo ururinta aaladaha gacanta, qalabka cabirka, iwm
(3) Noocyada wasakhahaasi muday:
Caaryada duritaanka waxaa loo qaybin karaa noocyo kala duwan iyadoo loo eegayo qaab dhismeedka caaryada, shuruudaha naqshadeynta wax soo saarka, qaabka wax soo saarka iyo qaabka rakibaadda iyo isticmaalka.
(a) Laba nooc oo saxan ah: qaabaynta duritaanka, caaryada dhaqaaqa iyo caaryada goonida ah ee caaryada waa lakala saaray, ka dibna qaybaha balaastigga ah ayaa laga soo saarayaa, oo sidoo kale loo yaqaan caaryada saxanka laba-geesoodka ah. Waa caag ah irbad caag ah oo aad u fudud oo aasaasi ah. Waxaa loo qaabeyn karaa sida caaryada cirbadaha oo keliya ama caaryada duritaanka godka badan iyadoo loo eegayo baahida. Waa caaryo la isku duro oo si ballaaran loo isticmaalo. Qaab loogu talagalay hal ama dhowr god oo wax taaj oo kale duray,
(b) Saddex saxan oo caaryo ah: oo sidoo kale loo yaqaanno laba caaryadeed oo kala tagaya. Marka la barbardhigo hal-gabal caaryada cirbadda dibedda ah, caaryada duritaanka laba-qeybinta ah waxay ku dareysaa qayb-dhaqaaq dhaqaajin qayb ka mid ah qaybaha caaryada go'an ee caaryada dhibic caaryada. Sababtoo ah qaabkeeda isku-dhafan iyo kharashka wax soo saarka sarreeya, guud ahaan looma adeegsanin caaryada qaybaha waaweyn.
(c) Caaryada orodyahanka kulul: caaryada orodyahanka kulul waxaa loola jeedaa caaryada adeegsata aaladaha kululaynta si ay u dhalaasho kanaalka uusan u adkeynin waqtiga oo dhan. Sababtoo ah way ka waxtar badan tahay wax soo saarka caaryada soo jireenka ah, iyo keydinta alaabta ceyriinka ah, sidaa darteed caaryada kulul ee orodleyda maanta ka jirta dalalka horumaray iyo warshadaha ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Nidaamka orodyahanka kulul wuxuu leeyahay hal nidaam oo orodyahan kulul oo ka badan kan caaryada caadiga ah, markaa qiimuhu waa badan yahay.
(d) Laba midab oo midab leh: guud ahaan waxaa loo yaqaanaa laba nooc oo ah qalab caag ah isla mashiinka wax lagu duro ee mashiinka wax lagu mudaayo, laba qaab, laakiin wax soo saarka caaryada mar kaliya. Guud ahaan, hawshan wax-ka-qabashada waxa sidoo kale loo yaqaannaa laba-cirbaddaynta duritaanka, oo inta badan lagu dhammaystiro qaybo caaryo ah, waxayna u baahan tahay mashiin gaar ah oo laba-midab leh oo wax lagu duro ah.
(4) Nidaamka hoose ee dhismaha ee caaryada la isku duro waa sida soo socota
Caaryada cirbadaha guud ahaan waxay ka kooban tahay nidaamyada hoose ee soo socda:
(a) Nidaamka qiimeynta. Waxay loola jeedaa kanaalka qulqulka balaastigga ee caaryada ka soo baxa cirbadda duritaanka illaa daloolka. Nidaamka guud ee qolka gaasku wuxuu ka kooban yahay muruq, qaybiye, irid iyo dalool qabow.
(b) Dhinac dhinaceeda iyo habka jiidaha xudunta.
(c) Habka hagidda. Mashiinka balaastigga ah, wuxuu inta badan leeyahay shaqada meeleynta, hagida iyo qaadista cadaadiska dhinaca qaarkood si loo hubiyo saxnaanta dhaqaaqa iyo xirida caaryada go'an. Farsamaynta hagida dhimashadu waxay ka kooban tahay tiir hagitaan ah, gacmo hagis ama godka hagaha (oo si toos ah loogu furay shaxanka) iyo dejinta dusha sare ee koorta.
(d) Nidaamka Ejection / demouldinging. Oo ay ku jiraan riixista iyo habka jiidaya xudunta. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in laga saaro qaybaha caaryada. Waxay ka kooban tahay usha ejector ama tuubada tuubada ama saxanka riixaya, saxanka ejector, usha saxarada go'an saxarada go'an, dib udajinta usha iyo usha jiidaya.
(e) Nidaamka xakamaynta heerkulka. Qalabka qaboojinta iyo kuleylka.
(f) Nidaamka qiiqa.
(g) Qaybaha wax isku shaandheynta waxaa loola jeedaa qaybaha ka kooban meeriska caaryada. Waxaa inta badan ka mid ah: feer, dhaddig u dhinta, xudunta, sameynta usha, sameynta giraan iyo gelinta.
(h) Qaybaha go'an iyo kuwa rakiban. .
(5) Waxyaabaha loogu talagalay wasakhahaasi
Caaryada balaastigga ah waxaa ka mid ah caaryada kuleylka kuleylka leh iyo caaryada balaastigga ah ee kuleylka leh. Birta loogu talagalay caaryada balaastigga ah ayaa looga baahan yahay inay lahaato waxyaabo gaar ah sida xoog, adadag, xirashada iska caabin, xasiloonida kuleylka iyo iska caabbinta daxalka. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo baahan yahay in la helo habsami u socod wanaagsan, sida daaweynta kuleylka yar yar, waxqabadka wanaagsan ee ka shaqeynta, caabbinta daxalka oo wanaagsan, shiidiista iyo waxqabadka nadiifinta, hagaajinta waxqabadka alxanka wanaagsan, qallafsanaanta sare, kuleylka kuleylka wanaagsan iyo cabirka deggan iyo qaabka shaqada shuruudaha.
Nooca qalabka la isku duro ee loo isticmaalo caaryada duritaanka waxay saameyn weyn ku leedahay xulashada birta caaryada ah. Haddii wakiilka xoojinta ama wakiilka kale ee wax ka beddelka lagu daro, sida fiber galaaska, dhaawaca ku yimaad caaryada waa weyn yahay, sidaa darteed xulashada maaddada waa in loo tixgeliyaa si dhammaystiran. Qalabka caagga ah ee aashitada adag waa PVC, POM, PBT; qalabka caag acid daciifka ah waa PC, PP, PMMA, PA. Guud ahaan, S136, 1.231, 6420 iyo biraha kale ee caaryada ah ayaa loo xushay balaastikado wax gubaya oo xoog badan, halka S136, 1.2316420, SKD61, NAK80, pak90718, iwm ayaa loo dooran karaa caag jilicsan oo daciif ah. Shuruudaha muuqaalka ee alaabooyinka ayaa sidoo kale saameyn weyn ku leh xulashada qalabka caaryada. Qeybaha hufan iyo alaabada leh muraayadda dusha sare, qalabka la heli karo waa S136, 1.2316718, NAK80 iyo pak90420. Caaryada leh shuruudaha hufnaanta sare waa inay doortaan S136, oo ay ku xigto 420. Haddii kaliya ay buuxiso shuruudaha alaabta iyada oo aan la tixgelin qiimaha iyo qiimaha, waxaa laga yaabaa inaysan noqon naqshadeeye wanaagsan, qiimaha wax soo saarka caaryada ayaa sidoo kale ah mudnaanta koowaad
(1). Mashiinka wax taaj oo kale duray:
waa qalabka ugu weyn ee wax lagu nadiifiyo ee lagu sameeyo balaastikada wax lagu dhejiyo ee thermoplastic ama thermosetting ee qaababka kala duwan ee wax soo saarka caaga ah iyadoo wax lagu qayo caag caag ah Mashiinka wax lagu duro ee duritaanka Horizontal, mashiinka wax lagu duro ee duritaanka tooska ah, laba mashiinka wax lagu duro oo midab leh, mashiinka wax taaj oo kale ee duritaanka buuxa mashiinka wax taaj oo kale duray, shaqooyinkeeda aasaasiga ah waa laba:
(a) Kuleyli balaastigga si uu u dhalaaliyo.
(b) Cadaadis sare ayaa lagu marinayaa caaga la shubay si uu u soo saaro una buuxiyo godka. Xuduudaha ugu muhiimsan ee mashiinka wax lagu duro ee la isku duro waa: xoog isku haysa, mugga duritaanka ugu badan, dhumucda caaryada ugu badan iyo tan ugu yar, istaroogga dhaqaaq, kala dheereynta usha jiifka, istaroogga soo bixida iyo cadaadiska ejection. Qaybaha leh cabirro kala duwan, qaab-dhismeedyo iyo qalabyo, iyo sidoo kale qaabab kala duwan oo noocyo iyo noocyo kala duwan leh, moodello kala duwan iyo cabbiraadaha mashiinnada wax lagu duro ee la isku duro waa in la xusho. Mashiinka wax lagu duubo ee korontada ku shaqeeya oo buuxa wuxuu leeyahay faa'iidooyinka xawaaraha duritaanka sare, xakamaynta saxda ah iyo waxtarka wax soo saarka sareeya. Waxaa loo isticmaalaa duritaanka wax lagu duro ee qaybo ka mid sax ah.
(2) Qalabka caawinta:
(a) Mashiinka mashiinka wax lagu duro ee cirbadeynta ah waa qalab wax soo saar otomaatik ah oo ku dayan kara shaqooyinka qaar ee addimada sare ee aadanaha, wuxuuna si otomaatig ah u xakameyn karaa inuu u qaado alaabada ama ku shaqeeyo qalab sida ku xusan shuruudaha horay loo sii dejiyay. Isuduwaha wuxuu hubin karaa iswaafajinta wareegga qalliinka, wuxuu hagaajiyaa tayada wuxuuna ka dhigayaa mid ammaan ah. Iyadoo horumarka degdegga ah ee warshadaha wax soo saarka balaastigga ah ee Shiinaha, heerka otomaatigga qalabka wax taaj oo kale ee cirbadeynta ayaa sii kordhaya. Mashiinnada wax lagu duubo ee duritaanka casriga ah ayaa badanaa lagu qalabeeyaa manjeerayaal si loo hagaajiyo wax soo saarka wax soo saarka.
(b) Saliida kululeeyaha / qaboojiyaha biyaha: kululaynta ama qaboojinta dareeraha maraya caaryada, kordhinta heerkulka caaryada, hagaajinta tayada dusha sare, ama si deg deg ah u yareysa heerkulka caaryada si loo wanaajiyo wax soo saarka.
(c) Qalajiyaha huurka: ka saar qoyaanka walxaha balaastigga ah adoo kululeynaya isla markaana afuufaya.
Siminaarka caaryada duritaanka
Line-soo-saarka wax taaj oo kale duray
Qeybaha caaga ah xariijinta rinjiga
Mashiinka balaastigga ah ee loo isticmaalo wax lagu duro mudista: Hoos waxaa ku qoran thermoplastics-ka ugu caamsan ee loo isticmaalo mudista cirbadaha: Acrylonitrile Butadiene Styrene, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), waa mid aan caadi aheyn oo thermoplastic iyo polymer amorphous ah. ... Polyetylenka. ... Polycarbonate. ... Polyamide (Nylon) ... Polystyrene Saameyn Sare. ... Polypropylene
Waxyaabaha Cufnaanta Caaryo
Yaraynta Muuqaalka Codsiga
ABS(Acrylonitrite Butadiene Styrene) 1,04 ～ 1,08 0.60 Cabbirka xasilloonida, sifooyinka wanaagsan ee farsamada wanaagsan,electroplating fudud, wax taaj oo kale duray fudud guryaha caaga ah ee alaabada elektarooniga ah
PC (Polycarbonate) 1.18 ～ 1.20 0.50 Awood saameyn wanaagsan, cabir xasiloon iyo dahaadh wanaagsan.Caabbinta daxalka oo liidata iyo caabbinta iska caabbinta guryaha balaastigga ah, daboolka difaaca, qaybo gudbinta yar oo loogu talagalay alaabada elektarooniga ah, alaabada korantada
PMMA(Polymethyl methacrylate) 1.17 ～ 1.20 0.60 Waxay leedahay gudbin wanaagsan oo ah 92% iyo xoog farsamo wanaagsan oo dhameystiran.Awoodda saamaynta ururadu way hooseysaa, way fududahay in culays la saaro dildilaaca Muraayadaha Transparent iyo muujinta astaamaha garaaca qalabka
PP(Polypropylene) 0.89 ～ 0.93 2.00 Waxay leedahay yaraansho sare, u adkaysiga qoyaanka,caabbinta heerkulka sare mana fududa in la jeexo.Cadaadis hooseeya, fududaan kara gabowga, waxqabadka heerkulka hooseeya Weelasha cuntada, miisaska miiska, sanduuqyada foornada microwave, weelasha caafimaadka
(koloriin) 1.38-1.41 1.50 Adag, xidhasho u adkaysta, dahaadh wanaagsan, sameynta waxqabad aad u adag, oo liita heerkulka sare Sameynta tuubooyin iyo astaamo
Nylon 1.12 ～ 1.15 0.7-1.0 Adag, xirtaan u adkaysta, biyaha u adkaysta, daal u adkaysta, ningax wanaagsan Hoos u dhac weyn, jihada Qaybaha mashiinka, qaybaha kiimikada, qaybaha gudbinta
POM (Polyacetel) 1.42 2.10 Guryaha farsamo fiican, xoog iyo adkaansho, xidho iska caabin iyo caabbinta saamaynta. Xasiloonida kuleylka oo liidata Qaybaha mashiinka, qaybaha kiimikada, qaybaha gudbinta, qaybaha isku dhaca iyo qaybaha gudbinta ee ka shaqeeya heerkulka qolka
TPU(Thermoplastic Polyurethane) 1.05 ～ 1.25 1.20 Elastomer, xirashada u adkaysta, saliida u adkaysta, dabacsanaanta heerkulka sare iyo hooseeya, aan sun ahayn Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay caafimaadka, cuntada, alaabta elektarooniga ah iyo jawiga heerkulka oo hooseeya
Habka wax taaj oo kale duray waa nidaam ah in alaabta ceeriin dhalaalay waa la cadaadiyey, la isku duraa, la qaboojiyey oo la kala saaray si ay u soo saaraan qaab gaar ah qaybo semi-dhammeeyey. Nidaamka guud ee wax lagu duro ee qaybaha balaastigga ah badanaa waxaa ku jira 7 marxaladood. : Dejinta halbeegga -> xiritaanka caaryada-> Buuxinta -> (gaaska la caawiyey, biyaha la caawiyey) cadaadiska dayactirka -> qaboojinta -> furitaanka caaryada -> demoulding.
Xawaaraha, cadaadiska, booska (istaroogga), waqtiga iyo heerkulka ayaa ah shanta xuddun ee habka wax taaj oo kale ee duritaanka. In wax soo saarka wax taaj oo kale duray, waxaa inta badan waa in la khaldo xuduudaheedu si loo hagaajiyo oo loo helo cabir iyo muuqaal u qalma.
Toddoba tiknoolajiyad wax lagu duubo oo caadi ah
1. Wax taaj oo kale oo laysku duro
2. Cirbadeyn xad dhaaf ah
3. Wax taaj oo kale duray Hotner
3. IMD: cirbadeynta qurxinta qurxinta
4. Cirbadaha qaybo waaweyn
5. Wax taaj oo kale oo duritaanka qaybo muhiim ah
6. Wax ka sameynta cirbadeynta qeybaha gawaarida
7. Cirbadaha qaybo derbi dhuuban
Waxaan ku siin karnaa qaybahaaga caaga ah ee wax lagu shubo ee polymer mouldable polymer iyo mugga 0.1gram-10kgs aad u baahan tahay. Intaa waxaa sii dheer, waxaan awood u yeelan karnaa xad-dhaafka guntinnada dunta leh, isku xirayaasha biraha isku xira ama qaybaha kale ee la mideeyay ee la isku duro si aan u siino badeecadaada xirfad dhameystiran. Kal-hoosaadyo hoosaadyo ayaa sidoo kale loo abuuri karaa qayb ka mid ah adeegyadeena wax ka sameynta cirbadaha balaastigga ah oo lagu soo lifaaqi karo shuruudahaaga. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa geeddi-socodka dhameystirka kala duwan, oo ay ku jiraan:
* Dahaadhka Chrome ee balaastigga ah
* Sawir qaadista dijitaalka ah
* Daabacaadda suufka
* RF gaashaan
* Baakadaha iyo isjiidjiidka
* Xakamaynta tayada wax taaj oo kale ee duritaanka Waxaan sidoo kale bixinaa qalab deg deg ah, noocyo hore iyo adeegyo wax taaj oo kale ah.
Ciladaha wax ka qabashada iyo cilad bixinta
Kadib sameynta, waxaa jira faraqyo gaar ah oo udhaxeeya qaybaha balaastigga iyo heerarka tayada ee horay loo cayimay (heerarka kormeerka), kuwaas oo aan buuxin karin shuruudaha nidaamka xiga. Tani waa cilladda qaybaha caagga ah, oo badanaa loo yaqaan dhibaatooyinka tayada. Waa inaan baranaa sababaha cilladahan oo aan u yareynnaa ugu yaraan. Guud ahaan marka laga hadlayo, cilladahan waxaa sababa dhinacyada soo socda: caaryada, alaabta ceyriinka ah, xuduudaha nidaamka, qalabka Deegaanka iyo shaqaalaha.
1. Cilladaha guud:
(1). Farqiga midabka: haddii midabka qaybaha wax taaj oo kale ee la isku duro uu ka duwan yahay muunada midabka caadiga ah ee indhaha qaawan, waxaa lagu xukumi doonaa kala duwanaanta midabka hoosta isha iftiinka caadiga ah.
(2). Buuxin ku filan (koolo la'aan): Qaybaha wax isku duro ee cirbadaha ayaan buuxin, waxaana jira goobooyin, faaruq, godad soo yaraanaya, iwm, oo aan waafaqsanayn shaxanka caadiga ah, ee loo yaqaan koolada yaraanta.
(3). Qaloocsanaanta qalloocinta: qaabka qaybaha balaastigga ah ayaa is beddeli doona oo qalloocin doona ka dib demo ama waqti dambe. Haddii dhinaca toosan uu ujeedo gudaha ama dibedda, ama qaybta fidsan ay leedahay kor iyo hoosba, haddii cagaha wax soo saarku uusan u sinnayn, waxaa loo yaqaan 'deformation', oo loo qaybin karo isbeddel maxalli ah iyo guud ahaan isbeddel.
(4). Calaamadaha xariiqda (khadadka): raadadka toosan ee dusha sare ee qaybaha balaastigga ah, oo ay sameeyeen iskudhafka balaastigga ku jira caaryada, laakiin dhalaalku si buuxda ugama wada dhafan isgooskooda, sidaa darteed looma dhexgeli karo hal. Intooda badan waa khad toosan, kana soo koraya qoto dheer ilaa gacmeed. Dhacdadani waxay leedahay saameyn gaar ah muuqaalka iyo guryaha farsamada.
(5). Ripple: dusha sare ee cirbadaha qaybo ka sameysan ayaa leh wareeg ama daruur sida waviness, ama gudaha sheyga hufan ayaa leh qaab ruxrux ah, oo loo yaqaan 'ripple'.
(6). In ka badan gees (flash, Cape).
(7). Farqiga cabbirka: yaraanshaha iyo websaydhka qaybaha duritaanka ee la isku duro ee habka wax u qaabeynta
2. Xakamaynta iyo hagaajinta tayada: Waxaa ku jira teknolojiyadda iyo maaraynta
(1). Heer farsamo: xulashada saxda ah ee qalabka, naqshadeynta qaabdhismeedka wax soo saarka, xulashada qalabka caaryada ku habboon, habeynta qaabeynta qaab dhismeedka caaryada si loo fududeeyo buuxinta, qiiqa iyo ka saarida qeybaha, dejinta macquul ah ee dusha lagala baxo, kanaalka qulqulka iyo marinka caagga; isticmaalka qalabka wax lagu duro ee duritaanka ama nidaamka.
(2). Heerka maaraynta: xakamaynta tayada agabka soo galaya, dejinta siyaasado iyo heerar tayo tayo leh, tababar farsamo, dejinta qaabab qeexitaan macquul ah, duubista xogta iyo falanqaynta, iyo sameynta nidaam tayo leh.
Shirkadda Mestech waxay soo saartaa boqollaal caaryayaal ah iyo malaayiin badeecooyin caag ah oo loogu talagalay macaamiisha maxalliga ah iyo kuwa adduunka oo dhan sanadkiiba. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato ama aad wax ka weydiiso oraahda ku saabsan wax taaj oo kale duray caag ah, fadlan nala soo xiriir maanta.